का का, ओ काका ? तपाई त यसरी च्यापेर खानु हुन्छ ।
का का तपाई त यसरी च्यापेर खानु हुन्छ । उडेर आउनु हुन्छ र उडेरै जानुहुन्छ ।
" कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका जनताको समस्या जिऊ का तिउ "
नेपाली जनतालाई रातारात लखेट्नु थियो त ! नेपाली नागरिकता खोसेर किन लखेट्नु भएन ?
तर काका जन-आवाज , यता कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका जनताको वास्तविक बिडम्बना उस्तै '' पुरै सडक हिलाम्मे र अर्को तर्फ आरक्ष पिडित जनताको समस्या जिऊ का तिउ ! याददाश छ भने एक पटक मात्र एक पटक पछाडि फर्केर हेर्नुस् त ! 2058 साल ? हो 2058 सालमा तपाईको सरकारले नै नेपाली सेना र हाती लगाएर मध्यरातमा सुतेका जनताको घर धुरी भत्काउनु भो, र पसिना चुहाएर गरि खाने किसान नेपाली जनतालाई रातारात लखेट्नु भो !!
पुरानो रौतेलि बिचवा, लालपानी, अन्डैया, पटैया लगायत उत्तरतिर ढक्का, चानदेव, कालागौडी तारापुर ,भत्पुरी लगायत थुप्रै ठाउँका नेपाली जनताको बिचल्ली स्मरण गराउँदा मानस पटलमा ताजै हुनुपर्छ र हुनुपर्ने हो का का यदि नेपाल आमाको सपुत भए ? भुमिहिन आरक्ष पिडितको यो समस्या समाधान छिट्टै हुन्छ, गर्छौ भोट दिनुहोस् भन्ने नाइकेहरू नआएका त होइनन् , तर,,,,, समस्या धेरैले सुने , थोरैले बुझे , कसैले प्रत्यक्ष देखे , त कसैले लेखे , हो सच्चै गुनासो सुन्दा सुन्दा काका का कान त अब पाके पनि होलान तर यहाँ को यो फल सोह्र- सोह्र बर्ष सम्म पाकेन किन ?
यो बर्षातमा मेरो नजर बेल्डाडी गाँउ पालिका झरनाखोला तिर बसोबास गर्ने आरक्ष पिडित गरिब नेपाली जनता तिर लाग्यो ।
म यात्राको क्रममा थिए । मुसलधारे पानी परि रहेको थियो र निरन्तर मुसलधारे पानी परिरहदा एक ठाउँमा टक्क रोक्किए । अब पानी रूके पछि जानुपर्ला ,,,,,;;;;; जङ्गल को छेउ ! यता उता हेरे अलि राम्रो पर्खिने ठाउँ कहि देखिन , अलिक पर स-साना खरले छाएका झुपडी घरहरु थिए । त्यही एक झुपडी भित्र पसेँ । त्यहाँ खरले छाएको छानो पुरै चुहिरहेको थियो । कठै घर भित्र उभिनु र बाहिर उभिनुमा कुनै फरक देखिन । त्यस भित्र बसी रहेका परिवारका सदस्यहरू पुरै रूझेका र भिजेका थिए । सात जनाको परिवार यत्र तत्र बाल बालिकाहरु निसस्त्र हेर्दा दया लागेर आयो ।
परिचय गरे, दर्दनाक दुःख र पिडाका कुरा सुनाउँदै भन्नु भयो '' बाबु जमिन छैन मागेर खान्छौ । दिन भरि मागे पछि बल्ल एक छाक खानलाई हुन्छ तर अस्ति देखि परिरहेको निरन्तर बर्षा का कारण भिकमाग्न जान पनि सकिएको छैन हामी सम्पूर्ण परिवार हिजो साँझ देखि अहिलेसम्म दुई छाक भो, भोक-भोकै छौ । साना केटा केटीहरू भोकले ऊ हेर्नुस् त माटो मुखमा हाल्दैछन् ,......दयालाग्यो थोरै पैसा दिए...... । उहाँले आँखा बाट बरबरी
आँशु झार्नु भयो.......
अवस्था हेर्दा मेरो मन सिरिङ्ग भयो । मेरो भित्री आत्मा रून र बहकिन थाल्यो ! अनि मनमा अनेकन प्रश्नले डेरा जमायो.....का का ओ काका ????
काका भन्दिनुस् कि यि नेपाली जनता होइनन् ? हैन भने किन सौतेनी व्यवहार ?
यिनीहरुको अब को निकास अवस्था र व्यवस्था के हुने र कैले ?
जमिन खोसेर लखेट्नु थियो त ! नेपाली नागरिकता खोसेर किन लखेट्नु भएन ?
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कहाँ मर्यो ?
का का हुनत सडक शिलान्यास पनि भयो, यो सरकारले बन्दैछ भन्दैछ । त्यसैमा गर्व लाग्छ ।
अहिलेको यो अवस्थामा ।।
अन्ततः तपाईलाई यो बर्षातमा त्यो चुहिने छानो भित्र ति परिवार संगै दुईछाक नखुवाएर सुताउन मन्थ्यो । र यो बर्षातमा दैजी - बेल्डाडी, कलुवापर - बेलौरी, हिलाम्मे सडकमा ति 601 लाई संगै कुदाउन मन्थ्यो ।
जनताको आक्रोश र दयनीय अवस्था '' काकालाई सन्देशका लागि लेख्ने कुचेष्टा ' का का का का काका '